प्रहरी हवल्दारको नक्कली प्रेम–पासो- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
युवतीको मृत्यु रहस्यमय
भाद्र ६, २०७५ जनकराज सापकाेटा
काठमाडौँ — साउनको कुरा हो । मीनबहादुर पुडासैनीले अचानक खबर पाए, बैनी चमेली घले बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी छन् । अनामनगरमा रहेका मीन हतारिँदै वसुन्धरामा रहेको ग्रिन सिटी अस्पतालमा पुगे । बैनीको सघन उपचार कक्षामा उपचार भइरहेको रहेछ ।
अस्पतालकै कर्मचारीले विष सेवन गरेकी चमेलीलाई उनका श्रीमान्ले अस्पताल ल्याएर भर्ना गरेको सुनेपछि पुडासैनी चकित परे । किनकि रसुवा कालिका गाउँपालिका ५ घर भई असार २३ देखि रसुवाकै उत्तरगथा गाउँपालिका २ स्थित डाँडागाउँ माविमा शिक्षक पदमा कार्यरत बैनीको बिहे भएकै थिएन ।
उपचारकै क्रममा सोही दिन बैनीको मृत्यु भएपछि पो पुडासैनीले थाहा पाए, रसुवाबाट कसरी बैनी काठमाडौं आइन् । जीवनका के कस्ता घटना जेलिएर कसरी बैनीको मृत्यु भयो ? चमेलीको मृत्युको कथामा जोडिएका छन्, एक प्रहरी हवल्दार । गोरखाको विकट ताक्लुङ गाउँबाट गोर्खा सदरमुकामको टक्सार हुँदै चितवनमा बसाइँ सरेका हवल्दार राजेन्द्र तिवारीले अस्पताल भर्ना गर्दा आफू बिरामीको श्रीमान् भएको बताएका थिए । चमेलीको मृत्युका पछाडि यिनै राजेन्द्रसँग जेलिएको सम्बन्ध जिम्मेवार छ ।
४ साउन । बिहान ३:३५ । अस्पतालको कागजात हेर्दा मनमैजुस्थित डेराबाट चमेलीलाई तिवारीले महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएको थाहा हुन्छ । सघन उपचार कक्षमा बेड खाली नभएपछि अस्पतालले चमेलीलाई ग्रिन सिटी अस्पतालमा रेफर गरिदिएको थियो । जहाँ दाइ मीनले निस्प्राण बैनीलाई भेटेका थिए । बैनीको मृत्युपछि र उनको मोबाइलमा भएका म्यासेज र म्यासेन्जरमार्फत भएका कुराकानीको रेकर्ड सुनेपछि मीनले थाह पाए, कसरी बैनी नक्कली प्रेम–पासोमा परेकी रहिछे भनेर ।
एक वर्षभन्दा लामो समययता चमेली हवल्दार राजेन्द्रसँग प्रेमसम्बन्धमा थिइन् । राजेन्द्रले चमेलीलाई आफू अविवाहित भएको झूटो तथ्य बताएर प्रेमको नाटक गरेका थिए । प्रेमी विवाहित भएको थाहा पाएपछि चमेली सम्बन्ध टुटाएर बस्न खोजिरहेकी थिइन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त उनीहरूबीचको संवादको रेकर्ड सुन्दा चमेली प्रेमीको झूठ थाहा पाएपछि समझदारीमा सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । राजेन्द्र भने विवाहित भए पनि दोस्रो विवाह गर्ने पक्षमा रहेका थिए।
प्रेमसम्बन्धको सबै कुरा बिर्सेर आ–आफ्नो बाटो हिँडने पक्षमा चमेली रहे पनि राजेन्द्र भने आक्रोशित बन्दै सम्बन्धमा रहँदाका तस्बिरहरू प्रयोग गरेर चमेलीलाई उपयोग गर्ने पक्षमा उभिन्छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त उनीहरूबीचको संवादमा चमेलीले भनेकी छन्, ‘तपाईंको घरमा छोराछोरी छन्, श्रीमती छ । मलाई किन सत्य कुरा बोल्नुभएन ।’
सम्बन्धको यही उतारचढावमा स्कुल बिदा लिएर काठमाडौं आएकी चमेली केही दिनयता परिवारका सदस्यको सम्पर्कबाहिर हुन्छिन् । बैनीको मृत्युपछि मीनले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा बैनीमाथि हिंसा र बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै निवेदन दर्ता गराए । लगत्तै बालाजु वृत्तले राजेन्द्रलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । बालाजु वृत्तका डीएसपी चिरञ्जीवी कोइरालाले तिवारीलाई जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको बताए ।
डीएसपी चिरञ्जीवीले राजेन्द्रले विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको र चमेलीलाई डेरा लिएर राखेको बताए । मीनले बैनीको शरीरमा चोट रहेकाले घटना शंकास्पद रहेको बताए । प्रहरी सेवामा रहे पनि राजेन्द्रको विगत विवादास्पद देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत राजेन्द्र विगतमा केही आपराधिक घटना र महिला हिंसाको घटनामा पनि मुछिएका थिए । गोर्खाकै लार्के प्रहरीचौकी प्रोकमा जवान पदमा कार्यरत रहँदा राजेन्द्रमाथि व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका अनुसार २०६५ साउन १३ मा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सिर्दिबास १ की ३९ वर्षीया पम्फाकुमारी कार्कीलाई भीरबाट धकेलेर हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलेपछि २०६५ पुस ५ मा तिवारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । ‘जागिरले प्रहरी भन्थे अनेक गतिविधि गर्थे,’ राजेन्द्रको पूर्व छिमेकीसमेत रहेको एक स्थानीय शिक्षकले भने, ‘मान्छे मारेको केशपछि पनि जागिर जोडियो,’ उनले भने, ‘गाडी किनेका थिए, घरजग्गाको कारोबार गर्थे, प्रहरीको सामान्य जागिर खाने मान्छेले लाखौंलाखको व्यवसाय गरेको देख्दा हामी पनि छक्क परेका थियौं ।’
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:२७
संगीनाको चुँडिएको त्यो पदक
जाकार्ता, इन्डोनेसिया — संगीना वैद्य, नेपाली तेक्वान्दो क्वीन । एसियाली खेलकुद चलिरहँदा उनको मनमा एउटा बेग्लै छटपटीले डेरा जमाएको छ । मनमा हुटहुटी छ । उनलाई लाग्छ, मेरो नाममा पनि एसियाडको पदक हुनेछ ।
नेपाली तेक्वान्दोकी सफल महिला खेलाडी संगीनासँग एसियाडको पदक छैन । थुप्रै अन्तर्राष्टिय पदक त जितेकी छन् तर एसियाडको कुनै पदक नभएको सम्झँदा उनको मन बेचैन हुन्छ । एकछिन घोरिन्छिन्, ‘मैले खेलेर त जित्न सक्दिनँ, मेरा चेलाहरूले जितिदियून् त्यो नै मेरा लागि एसियाडको पदक हुनेछ ।’
एसियाडको १८ औं संस्करण जकार्तामा चलिरहँदा संगीना नेपाली तेक्वान्दो टोलीकी प्रशिक्षक हुन् । अर्का कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्ट र संगीनाको प्रशिक्षकत्वमा फाइटतर्फका खेलाडी यो एसियाड खेलिरहेका छन् ।
आफ्नो गलामा एसियाडको पदक नझुन्डिनुमा संगीनासँग एउटा नमीठो घटना जोडिएको छ । ‘सायद त्यो नै कारण हो कि ?’ उनी विगततिर फर्किन्छिन् ।
‘एसियाडका लागि क्लोज क्याम्पमा बस्ने दिन थियो त्यो । त्यसकै लागि आफ्नो सामान लिन त्रिपुरेश्वर, रंगशालाबाट बालाजुतर्फ जाँदै थिएँ । रंगशालाबाट के मोडिन मात्र लागेथें कीर्तिपुरको बसले ट्याक्सीलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा झ्याम्मै हान्यो । मोटरसाइकल कच्याककुचुक भयो । लेग गार्डले पनि बचाउन सकेन । मेरो दायाँ खुट्टा ठनक्कै भाँचियो । यदि खेलाडी थिइनँ भने त सायद ज्यान बच्दैनथ्यो । किनकि म उफ्रेर अर्काेतिर ढल्न पुगेको थिएँ ।
मलाई अफिस जान लाग्नु भएको एकजना दाजुले वीर अस्पताल पुर्‍याइदिनुभयो । त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने भएपछि बी एन्ड बी रेफर गरियो । कठिन अप्रेसन भयो । घुँडामा स्टिल राख्नुपर्‍यो । तीन महिना त हस्पिटलकै बेडमा बसेँ ।’ सन् १९९८ को बंंैकक एसियाडलाई छनोट भइसकेकी संगीना एक महिनाअघि डाकिएको क्लोज क्याम्प बस्ने दिनको घटना सुनाउँदै थिइन् । त्यो आततायी घटनाले उनको एसियाड पदक लुटिएको थियो, खोसिएको थियो । किनकि उनी उच्च फर्म थिइन् । फ्लाइवेट समूहमा उनलाई चुनौती दिने सायदै थिए ।
त्यसको केही समयअघि मात्र अस्ट्रेलियाबाट एसियन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेर फर्केकी थिइन् । एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जित्ने उनी एक्लो नेपाली खेलाडी हुन् । त्यसले गर्दा बैंकक एसियाडमा उनीबाट पदक आउने पूर्ण भरोसामा थियो नेपाली तेक्वान्दो ।
भन्छिन्, ‘यदि त्यो समयमा मैले खेल्न पाएको भए कुनै न पदक जित्थें । म उच्च फर्ममा थिएँ । मेरो तौलमा कसैले आँक्न सक्दैनथे । एसियन च्याम्पियनसिपमा पदक जितेको थिएँ । त्यो भने एकदमै प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिता हो । त्यसले गर्दा सबैजना मैले पदक जित्नेमा ढुक्कजस्तै थिए ।’
नेपालले एसियाली खेलकुदमा इतिहास रचेको नै बैंकक एसियाड हो । जहाँ नेपालले रजत पदक जितेको थियो, त्यो पनि तेक्वान्दोबाट ।
त्यो क्षण एउटा शिखरमा रहेकी खेलाडीको खेल्न नपाउँदाको पीडा कस्तो होला ? संगीना भन्छिन्, ‘हररात पीडा हुन्थ्यो । लाग्थ्यो अब खेल्न सक्दिनँ । मेरो तेक्वान्दो करिअर सकियो अनि बेडमै कहिलेकाहीँ भक्कानो छुट्थ्यो । सम्हालिन सक्दिनथें । डाक्टरहरूले सम्झाउथें । भन्थे, तिमी फेरि खेल्न सक्छौ ।’
उता बैंककमा समकालीनहरू सविता राजभण्डारीले रजत पदक जितेर एसियाडकै इतिहास बनाइदिइन् भने सपना मल्ल र किशोर श्रेष्ठले पनि कांस्य जितेका थिए । सविताले जितेको त्यो रजत नै नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको एसियाडकै ठूलो पदक हो ।
चिकित्सकहरूले तिमी फेरि खेल्न सक्छौ भनेको कुरा संगीनालाई विश्वास थिएन । लाग्थ्यो, ‘मलाई सान्त्वना दिन उहाँहरूले त्यसो भनिरहनुभएको छ । अन्तत: १/२ महिनापछि खुट्टाले टेक्न सक्ने स्थितिमा पुगें ।’ डा. अशोक बाँस्कोटा, बाबुकाजी श्रेष्ठसहित चिकित्सक टोलीको एकदमै सहयोग थियो उनलाई । ‘उहाँहरूले ‘एसियाड खेल्न पाएनौ, साफ खेल्न सक्ने हुन्छौ’ भनेर हौस्याउनुहुथ्यो । तर आफ्नो सुकेर गएका खुट्टा देख्दा के खेल्न सक्छु र भन्ने लागिरहन्थ्यो ।’
एसियाडको ९–१० महिनापछि नेपालमै आठौं साफ खेलकुद आयोजना हँुदै थियो ।
अस्पतालबाट निस्केको केही महिनापछि बैसाखीको सहारामै उनले जिम गएर लेगको पावर बढाउन थालिन् । कहिलेकाहीँ दायाँ खुट्टाको पीडासँगै बायाँ खुट्टाले पनि काम नगर्ला भन्नेमा पनि उनी त्यत्तिकै चिन्तित थिइन् । तर बिस्तारै खुुट्टाले भर दिन थाल्यो । दिन प्रतिदिन सुधार हुन थाल्यो । फेरि उनको मनमा आशाको बीजारोपण भयो, ‘डाक्टरहरूले भनेजस्तो मैले फेरि खेल्न सक्छु कि ?’
जाकार्तास्थित जेसीसी प्लेनरी हलमा विगत कोट्याउँदा संगीनाले सुनाइन्, ‘त्यो घटनापछि फेरि खेलाडीका रूपमा मैले पुनर्जन्म लिएँ । तेक्वान्दोमा रमाएँ अनि सफलता चुमें ।’
एउटा डरलाग्दो दुर्घटनाबाट फर्केकी उनले त्यसपछि झन् छु्ट्टै इतिहास रचिन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं र २००४ को नवौं साफ खेलकुद पाकिस्तानमा स्वर्ण जित्न सफल भइन् । एसियन च्याम्पियनसिपमा फेरि रजत हत्याइन् । २००२ को बुसान एसियाड खेल्दै ओलम्पिकसम्म पुगिन् । उनले २००४ को एथेन्स ओलम्पिक खेलेकी हुन् । छनोट भएर ओलम्पिक खेल्ने पहिलो महिला पनि बनिन् । ओलम्पिक खेल्दासम्म उनको घुँडाबाट पूर्ण रूपमा स्टिल हटिसकेको थिएन । तर उनले आफ्नो साहसिक यात्रा अगाडि बढाइरहिन् । अहिले प्रशिक्षणमार्फत यो यात्रामा आइपुगिन् ।
थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलिसकेकी संगीना अहिले र पहिलेको तेक्वान्दोमा धेरै फरक देख्दिनन् । भन्छिन्, ‘पहिला पावर गेम खेल्नुपथ्र्यो अहिले टेक्निकल खेल्नुपर्छ । टेक्निक उही हो । मात्र अहिले प्रविधिसँग खेल्नुुपर्छ । सेन्सरसँग अभ्यस्त हुनुपर्छ । जमाना स्मार्ट छ । खेललाई पनि स्मार्ट बनाइएको छ । दिमाग लगाएर खेल्न सकियो भने झन् सजिलो हुन्छ ।’
के हाम्रा खेलाडी दिमाग लगाएर खेल्दैनन् या स्तर खस्किएको हो त ? संगीना भन्छिन्, ‘त्यो होइन, हामी प्रविधिसँग अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । प्रविधिको खेलसँग हामी बामे सर्ने स्थितिमा छौं भने अरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, लगानी त्यहीअनुसार गरेका छन् । प्रविधि त्यहीअनुसार भित्र्याएका छन्, तब न सफलता पाउँछन् । हामीलाई त्यो अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ ।’
एसियाडको पछिल्ला दुुई संस्करणमा तेक्वान्दोमा नेपाल पदकविहीन बनेको थियो । ग्वाङझाउ र इन्चोनमा कुनै पदक नजितेको तेक्वान्दो नेपालको एसियाड इतिहासमा भने सफल खेलमा पर्छ । सन् १९८६ को सोलदेखि तेक्वान्दोले एसियाडमा प्रवेश पाएको थियो । नेपालले डेब्युु संस्करणमै चार कांस्य पदक जितेको हो । १९९० को हिरोसिमा एसियाडमा तेक्वान्दो समावेश नै भएन । नेपालले एसियाडमा १ रजतसहित १४ पदक जितेको छ ।
संगीनाले भारतमा सम्पन्न १२ औं साग खेलकुददेखि राष्ट्रिय टोली हेर्न थालेकी हुन् । उनकै प्रशिक्षणमा रहेकी निशाले रियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:२५